I-Apple kwakhona ivumela ukwehla kwi-iOS 10.3.3 nge-iPhone 6s | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | iOS 11
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, abafana baseCupertino bayeka ukusayina ingxelo yokugqibela ye-iOS 10 ekhutshwe yinkampani, ukuphelisa nakuphi na ukubanakho ukubuyela kwi-iOS 10.3.3, Inguqulelo yamvanje ye-iOS ngaphambi kokumiliselwa kwe-iOS 11. Baninzi abasebenzisi abathi emva kohlaziyo lwe-iOS 11, baqinisekise ukuba iingxaki zebhetri, ngakumbi ii-iPhone 6 kunye ne-iPhone 7, ziguqula isixhobo sibe yintloko ebanyanzela ukuba bahlale Phatha itshaja kunye nayo, kuba xa usebenzisa ifowuni ngesiqhelo, ibhetri iyaphela emva kwemini ngenhlanhla. U-Apple akazange aphawule ngalo mbandela, kodwa into ayenzileyo yile Phinda usayine i-iOS 10.3.3 kuphela kwi-iPhone 6s.
Asazi ukuba kutheni i-iPhone 6s kuphela sisixhobo esikwi-eNgexesha lokupapasha inqaku, kunokwenzeka ukuba ubuyele kwi-iOS 10.3.3. Isenokuba yimpazamo kwiiseva zika-Apple, okanye mhlawumbi inkampani iyazibona iingxaki zebhetri zalesi sixhobo ngaphandle kokuvumela ngokusemthethweni bonke abo bachaphazelekayo ukuba babuyele kwi-iOS 10.3.3 de inkampani ikhuphe uhlaziyo olutsha.liphi eli xesha ukuba, iingxaki zebhetri isonjululwe.
Ukuba uphose ithuba lokubuyela kwi-iOS 10.3.3 kwaye ufuna ukushiya i-iOS 11, ungagqitha Oku kubhaliwe Apho ndicacisa khona ngokweenkcukacha ezinkulu indlela esinokuthotywa ngayo ukusuka kulo naluphi na uhlobo lwe-iOS 11 ukuya kwi-iOS 10.3.3. Ngexesha le khuphela i-firmware iOS 10.3.3 nguwe lo kufuneka ibonakale iluhlaza, njengomfanekiso okhokela eli nqaku, oqinisekisa ukuba okwangoku isatyikitywa yiApple.
Ukuba kwelinye icala ibomvu, oko kuthetha ukuba iApple iyekile ukuyisayina. Ukuba iApple ayityikityi uguqulelo lwe-iOS oyifakileyo, isixhobo soze sisebenze kwaye awuyi kuba nakho ukusisebenzisa ude ufake kwakhona uguqulelo lwe-iOS olusayinayo, njenge-iOS 11.0.1 okanye i-iOS 11.0.2.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 11 » I-Apple kwakhona ivumela ukwehla kwi-iOS 10.3.3 nge-iPhone 6s
Imbi kakhulu ayingo-7 nayo ... 🙁
ngomso ofanayo bayawuvumela. Ukuba ndifumana okuthile, ndiza kukwazisa.
Ndicinga ukuba ndiza kuthoba umgangatho lo mbandela mbi kakhulu.
Ndiphume ekhaya nge 100% bekungu 9 ekuseni ngoku kungo-2 emva kwemini kwaye ndikwi-42% kwaye iyi-6splus.
Uhlekisa ngenyaniso ...
Ndiye ndathoba iphone7 yam ngelixa besahamba (i-IOS 11 kunye nebhetri kukungcungcutheka okumsulwa) kodwa…. nto leyo endothusayo, kuba ndinewotshi kwaye nohlobo lwayo luye lwalayishwa, kuba undixelele ukuba ukuze ndisebenze kufuneka ndibene-IOS11 kwaye ngokuqinisekileyo iwotshi awukwazi ukuyithoba, kuye kwanyanzeleka ukuba ndibuye kwakhona kunye nesiphumo umsindo, ndisebenzisa ibhetri ye-smartcase kunye ne-ios11 kwi-80% yebhetri ifowuni yeyona icacileyo kwaye iyayeka ukutshaja ibhetri yefowuni ngesantya sombane, nge-ios 10 oku akuzange kwenzeke kum.
Ndisebenza nefowuni kwaye esi sijeziso
Ndigqibile ukwehlisa ii-6s zam ukuya kwi-10.3.3, into ongayithethiyo kukuba kamva ayinakubuyiselwa nge-backup eyenziwe nge-IOS 11 kuba ikuxelela ukuba inkqubo yangoku indala, ke kuya kufuneka ukhuphele zonke izicelo, i-imeyile iiakhawunti… njl njl, yonke into ngesandla, yiya faenon.
Ukuba ndikhuphele uguqulelo lwe-IOS 10.3.3 ukuyifaka kwi-iTunes kwi-iPhone 7 kunye, ngaba ndiza kuba nengxaki?
I-Apple isayina kuphela i-iOS 10.3.3 kwi-iPhone 6s. Ukuba uzama kwenye imodeli, iselfowuni ayinakuze isebenze kwaye awuyi kuba nakho ukuyisebenzisa. Iya kuhlala kwiscreen ilinde ukwenziwa isebenze ngonaphakade.
Ndifuna ukwenza ngokufana no @Oswaldo, buyela kwi-iOS 10.3.3 kwi-iPhone 6 Plus. Ndinefayile ekhutshelweyo kwi-pc yam, ndinokuthotywa kunye ne-iTunes okanye ayisebenzi. Enkosi
Isebenza kuphela kwii-iPhone 6s, kungekho enye imodeli. Ukuba ukhuphela i-firmware kwaye uyifaka, i-iPhone yakho ayizukugqitha kwiscreen apho kunikwe ingxelo yokuba iyasebenza.
Ndonwabile ukuba bayilahlile i-iOS 10.3.3 kwi-iPhone 6s, kuba ukusebenza kwebhetri kubi kakhulu, kwaye andizenzanga isigqibo. Kodwa izolo ndiqale ukubona ukuba zingaphi iiyure zebhetri kwaye ibiziiyure ze-4, ngaphambi kokuba ihlale iiyure eziyi-8 zokusetyenziswa kwesiqhelo. Ukufunda amanqaku kwi-intanethi ukuba ndingafanele ndikhuphele phantse nantoni na, ndayikhupha ibhetri yam kakubi. Ke kungcono ndisebenzise ngoku ukuba olu khetho lubuyile kwimodeli yam ye-iPhone.
Ukusetyenziswa kwebhetri kuyamangalisa ngokwenene. Ndishiye i-7 am ine-100% yebhetri yi-23: 30 kwaye iya kwi-37% ngaphezulu kweeyure ezingama-4 zokukhangela kwiwebhu kunye nemizuzu engama-30 yeevidiyo. Ukutya i-11.0.2 kusetyenziso olufanayo kuya kubiza ubuncinci amaxesha ama-2